Global Voices teny Malagasy » Maninona no toherin’ireo vahoaka indizeny ny filoha Ivan Duque? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Mey 2019 17:00 GMT 1	 · Mpanoratra Kati Hinman Nandika miora
Sokajy: Amerika Latina, Kolombia, Fampandrosoana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Teratany, Zon'olombelona
Ny Martsa 2019, nakaton'ireo  vondrompiarahamonina indizeny nandritra ny 25 andro ny lalambe migodàna iray tao amin'ny faritr'i Cauca. Ny 25 Aprily, nanatevina laharana azy ireo ireo hetsika sosialy hafa tamin'ny fitarihana fitokonana faobe . Tetsy ankilan'ireo fandrahonana ny zon'ireo indizeny, notoherin’ ireo mpitokona ny fampihenana ny tetibola ho an'ny fampianarana sy ny fihisaran'ny fametrahana ilay Fifanarahana Fandriampahalemana natao tamin'ny 2016 — izay iray tamin'ireo mpanakiana mafy dia mafy an'izany i Duque, mbola tokony hanana herintaona hofaranana.
“Mingas”, teny Quechua midika hoe “asa miaraka”, ampiasaina betsaka  any anatin'ireo hetsika fanoherana tany Amerika Atsimo no anarana nomen'ireo vahoaka indizeny ireo hetsipanoherana.
Raha ny governemanta nanaiky ny hifanakalo hevitra miaraka amin'ireo mpitarika indizeny momba ilay drafitra, hatreto aloha tsy mbola nisy fifanarahana farany vita. Araka ny lazain'ny gazety El Espectador , ny haben'ny tany tian'ny governemanta harovana amin'ny anaran'ireo vahoaka indizeny dia tena ambany lavitra noho izay angatahan'ireo vondrompiarahamonina:
Sonia nifanaovan'ilay filoha teo aloha Juan Manuel Santos sy ireo mpitarika ny Tafika Revolisionera Mitampiadiana ao Kolombià, ilay tarika mpiady anaty akata lehibe indrindra ao amin'ny firenena, namarana ny ady an-trano naharitra efa ho dimampolo taona ilay Fifanarahana Fandriampahalemana tamin'ny 2016 , tamin'ny nanambaràna ny fampitsarahana tanteraka ny poabasy ho takalon'ny fampandraisana anjara ireo mpikambana fahiny avy amin'ny FARC ho ao anaty andrim-panjakàna.
Ireo Fifanarahana Fandriampahalemana ihany koa dia niteraka fiarovana mba hisorohana ny fanangonana tany  ataon'ireo olontsotra sy orinasa vahiny any amin'ireo faritra ambanivohitra. Laharam-pahamehana ao anatin'izy io ny fitsinjarana ny tany sy fanondroana faritra vitsivitsy ho an'ireo indizeny, afro-kolombiàna ary vondrompiarahamonina tantsaha izay voadona mafy nandritra ilay ady lavareny. Ny tsy fitoviana tamin'ny resaka fananantany tany amin'ireo faritra ambanivohitra  no antony iray goavana  nahatonga ny FARC handray fitaovampiadiana tany amin'ny andian-taona 1960.
Kanefa, toa tsy ho vita mihitsy ny fametrahana tanteraka ilay fifanarahana raha mbola marobe ireo sehatra mpifikitra amin'ny nentindrazana ao Kolombia no manohitra mafy ireny fepetra ireny. Mandritra izany fotoana izany, mbola amperinasa ireo vondrona madinika mitam-piadiana any ambanivohitra , toerana itarihan-dry zareo ady mahafaty mba hahazo ny fifehezana ireo faritany fahiny nanjakan'ny FARC. Vokany, nanaka-danitra ny isan'ireo mpitarika sosialy maty nisy namono hatramin'ny nahavitana sonia ilay Fifanarahana. Raha miovaova be ihany ireo tarehimarika momba ny famaritana ny atao hoe “mpitarika sosialy”, ny birao mpanelanelana kolombiàna milaza fa 460 ireo mpitarika sosialy maty nisy namono teo anelanelan'ny 2016 sy 31 Martsa 2019.
Duque, miaraka amin'ilay tanan-kavanany, ny filoha teo aloha Álvaro Uribe, no anisan'ireo tena mpanenjika mibaribary an'ilay fifanarahana fandriampahalemana. Tato anatin'ny volana vitsy, nezahany ny nandemy  ny fahefan'ilay Sampandraharaha ao amin'ny Fitsarana misahana manokana momba ny Fandriampahalemana (JEP) rafitra iray ao amin'ny fitsarana najoron'ilay Fifanarahana mba hitsaràna ireo mpanao ady anaty akata sy ireo mpisehatra tao anatin'ny governemanta ahiana ho nanao heloka an'ady. Marobe ireo vondrona tezitra  tamin'ireny fepetra ireny, izay lazain-dry zareo fa manembantsembana ny tena fampihavanana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/18/138927/
 fitarihana fitokonana faobe: https://www.aljazeera.com/news/2019/04/thousands-hold-national-strike-colombia-budget-cuts-190425215502188.html
 ampiasaina betsaka: https://www.facebook.com/watch/?v=268336937402765
 milaza : https://www.elheraldo.co/colombia/duque-celebra-aprobacion-del-plan-nacional-de-desarrollo-en-el-congreso-627946
 no tena velona ahiahy manokana : https://pacifista.tv/notas/minga-2019-parar-duque/
 Fifanarahana Fandriampahalemana tamin'ny 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#End_of_the_conflict_(June_23,_2016_and_August_24,_2016)
 niteraka fiarovana mba hisorohana ny fanangonana tany: https://www.lawg.org/peace-accord-implementation-in-colombia-urgent-need-to-adhere-to-the-spirit-of-the-accords/
 Ny tsy fitoviana tamin'ny resaka fananantany tany amin'ireo faritra ambanivohitra: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36605769
 mbola amperinasa ireo vondrona madinika mitam-piadiana any ambanivohitra: https://www.hrw.org/news/2018/12/13/colombia-new-armed-groups-plague-afro-colombian-zone
 milaza : https://elpais.com/internacional/2019/03/29/colombia/1553877746_152510.html
 nezahany ny nandemy: https://uk.reuters.com/article/uk-colombia-peace-analysis/colombian-duques-bid-to-change-peace-deal-rattles-sabres-but-war-unlikely-idUKKCN1QY0MS
 Marobe ireo vondrona tezitra: https://www.efe.com/efe/english/world/hundreds-of-colombians-protest-in-defense-peace-deal/50000262-3924100